၂၂ သင်ပေးနိုင်သည့်နမ်းရှုပ်မှုအမျိုးမျိုး | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
အာရှနိုင်ငံများကဲ့သို့သောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများတွင်အနမ်းကိုလူသိရှင်ကြားပြုလုပ်ရန်မနှစ်မြို့ဖွယ်လုပ်ဆောင်မှုဟုသတ်မှတ်ထားပြီးအချို့သောလူ ဦး ရေများတွင်ပုဂ္ဂလိက၌ပင် ပြုလုပ်၍ မရပါ။ သို့သော်အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုတွင်ဤလုပ်ရပ်သည်လူအများကြားနှုတ်ဆက်ခြင်း၏အသုံးအများဆုံးပုံစံများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူသိရှင်ကြားဖြစ်စေ၊ နမ်းရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်၊ နောက်ဆောင်းပါးတွင်နာမည်အကြီးဆုံးအနမ်းအမျိုးအစားများဖြစ်သော Kamasutra အရရှင်းပြသည်။
1 ကွဲပြားခြားနားသောအနမ်းအမျိုးအစားများသည် Kamasutra အရသိရသည်
1.2 slant အနမ်း
ကွဲပြားခြားနားသောအနမ်းအမျိုးအစားများသည် Kamasutra အရသိရသည်
ကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများ၌ထိုကဲ့သို့သောလူသိများသည့်လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သော်လည်းအနမ်းအမျိုးအစားများအကြောင်းပြောဆိုရန်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းကိုသတ်မှတ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အနမ်းဆိုတာနှုတ်ခမ်းနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့ဖိအား၊ များသောအားဖြင့်တခြားသူရဲ့ပါးပြင်မှာဒါမှမဟုတ်သတ္တဝါတွေ၊ အရာဝတ္ထုတွေပါ ၀ င်ပေမဲ့၊ ဤသည်တွင်ဆွဲဆောင်ခြင်း၊ ချစ်ခင်တွယ်တာခြင်း၊ ချစ်ခင်တွယ်တာခြင်းသို့မဟုတ်အခြားသူများအားရိုးသားသည့်နှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်းသို့မဟုတ်လေးစားမှုလက္ခဏာပြခြင်းအတွက်အထူးလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုပါ ၀ င်သည်။
Kamasutra သည်အိန္ဒိယမှမူလရေးသားထားသောလက်ရာဖြစ်ပြီး၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ အထူးသဖြင့်လိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်များနှင့်အကြံပြုချက်များကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြထားသည်။ ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ, အနမ်းကအစရဲ့အစကိုအခြေခံတယ်။ ထို့ကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသော အနမ်းအမျိုးအစားများ ဤစာအုပ်ထဲတွင်သတ်မှတ်ထားသော
၎င်းသည်အနမ်းအများဆုံးသောအနမ်းအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီးရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားများတွင်အများဆုံးတွေ့ရသည်။ တူညီသောအရာတစ်ခုပြုလုပ်ရန်လူတစ် ဦး စီသည်ခေါင်းတစ်ဖက်ကိုတစ်ဖက်မှတစ်ဖက်သို့အနည်းငယ်တည့်တည့်ထိစေပြီးဤနည်းဖြင့်သူတို့ပိုမိုနီးကပ်လာစေရန်၊ သူတို့၏နှုတ်ခမ်းကိုထိတွေ့စေပြီးအနမ်းကိုထုတ်ပေးသည်။
el en တစ်ဖက်စောင်းနမ်းနှာခေါင်းများသည်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောနည်းဖြင့်ထိတွေ့ပြီးဘာသာစကားများအကြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသည် ပိုမို၍ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတွင်စိတ်အားထက်သန်မှုကိုနှိုးဆွပြီးချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုလှုံ့ဆော်ရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းများပါဝင်သည်။
ဤသူနှစ် ဦး ထဲမှတစ် ဦး သည်သူ၏ခေါင်းကိုနောက်ဆုတ်လိုက်သောအခါဤသို့ဖြစ်တတ်ပြီးနောက်တစ်ခုမှာမေးစေ့ကိုမေးကာသူ၏နှုတ်ခမ်းကိုနမ်းလိုက်သည်။
တိုက်ရိုက်အနမ်းတစ်ခုသည်နှုတ်ခမ်းနှစ်ဖက်စလုံးမှတိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်ပြီးအသီးကိုစုပ်ယူသောအခါပြုလုပ်သောလှုပ်ရှားမှုနှင့်တူသည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ဂရုမစိုက်နိုင်၊
ဤသည်ကိုလည်းအလွန်များအတွက်အသုံးပြုသည် အလိုဆန္ဒလှုံ့ဆော်, ၎င်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏အသုံးအများဆုံးပဏာမလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ စင်စစ်အားဖြင့်၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်ပြသနိုင်သောစိတ်အားထက်သန်မှုသည်အချို့သောသူများအတွက်လျှာများပိုမိုထိတွေ့နိုင်သောအခြားအနမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပို၍ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည်။
၎င်းတွင်အလွန်တိုတောင်းသောအနမ်းပါရှိသည်။ ၎င်းသည်ဆက်ဆံရေးကိုစတင်ရန်သို့မဟုတ်အဆုံးသတ်ရန်အတွက်ကောင်းစွာအသုံးပြုသည်။ နာမတော်ကိုရည်ညွှန်းသည်အတိုင်း, ဖိအားကိုအနမ်းထဲမှာ, တံခါးပိတ်နှုတ်ခမ်းအားကြီးသောလမ်းအတွက်အချင်းချင်းဆန့်ကျင်ဖိအားပေးနေကြသည်။
ဤသည်စုံတွဲများအကြားအကြိုက်ဆုံးအနမ်းအမျိုးအစားများတွင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတွင်အမျိုးသားတစ် ဦး ပါဝင်ပြီးများသောအားဖြင့်အမျိုးသားသည်သူမ၏ပါးစပ်နှုတ်ခမ်းကိုနှုတ်ခမ်းဖြင့်နမ်းခြင်းဖြင့်အစပြုသည်။ ဒါတုံ့ပြန်တယ် သူမ၏အောက်ပိုင်းနှုတ်ခမ်းကိုနမ်း.
အဆိုပါပန်းဂေါ်ဖီအနမ်းနှစ်ခုအတွက်တစ် ဦး, သူ၏နှုတ်ခမ်းနှင့်အတူသူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏သူတွေကိုယူသည့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအနမ်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်“ လျှာများရန်ပွဲ” ဟုခေါ်ဆိုသည့်အရာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ နမ်းခြင်းကိုအစပြုသူသည်သူ၏ချစ်သူ၏လျှာကိုလျှာနှင့်အတူသွားဖုံး၊ သွားနှင့်အာခေါင်များနှင့်ဖုံးအုပ်ပေးသည်။
အဆိုပါတုန်လှုပ်စေသောအရာသည်နှုတ်ခမ်း၏ကျယ်ပြန့်မှုနှင့်သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူ၏နှုတ်ခမ်းတို့၏ထောင့်များကိုအတိုချုပ်အနမ်းများပေးခြင်းပါဝင်သည်။ ဤသည်ကိုလည်းချစ်ခင်ခြင်း, နူးညံ့ကြင်နာမှုနှင့်ဂိမ်းတစ်ခုအဖြစ်သရုပ်ပြဘို့အလွန်အသုံးပြုသည်။
သူ၏နာမကအားလုံးပြောပြီး၎င်းသည်အဆုံးဖြစ်သည် မီးလျှံကိုနမ်းဖို့နမ်း တိကျစွာပြောရမယ်ဆိုရင်လိင်မှုကိစ္စစတင်လုပ်ဆောင်ဖို့အခြားတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုလှုံ့ဆော်ရန်။ ဤအရာသည်များသောအားဖြင့်ညသန်းခေါင်ယံတွင်၊ နှုတ်ခမ်းထောင့်အဆင့်၌ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။
၎င်းသည်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတွင်အာရုံပျံ့လွင့်နေစဉ်ချစ်သူ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်ရန်အထူးအနမ်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ စတင်ရန်အသုံးအများဆုံးနည်းမှာပါးကိုနမ်းခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ Kamasutra သည်ထိုနေရာနှင့် ပတ်သက်၍ ကန့်သတ်ချက်များမထားပါ၊ နဖူး၊ မျက်လုံး၊ လည်ပင်း၊ nape၊ ဆံပင်၊ ၏နှုတ်ခမ်း
အမည်ခံအနမ်းသည်လှုပ်ရှားမှုအတွင်းရှိနှုတ်ခမ်းနှင့်လျှာကိုသာမကလက်ချောင်းများပါ ၀ င်သည်။ ဤကိစ္စတွင်သူတစ်ပါး၏ပါးစပ်ကိုနမ်းပြီးနောက်သူတို့သည်လက်ချောင်းနှစ်ချောင်းဖြင့်သူတို့၏နှုတ်ခမ်းကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆက်ပြောသည်။
၎င်းတွင်ချစ်သူ၏မျက်နှာကိုပါးနပ်စွာနမ်းရှုပ်ခြင်းဖြင့်ဖုံးအုပ်။ မျက်လုံးဒေသသို့ရောက်သည့်အထိနှင့်မျက်တောင်များကိုနမ်းခြင်းပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်ချစ်ခင်တွယ်တာမှုနှင့်ပြသမှုအပေါ်နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုကိုဖော်ပြရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောအနမ်းဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်နှုတ်ခမ်းနှင့်လျှာသာမကထိရောက်မှုရှိကြောင်းပြသသည့်အနမ်းများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤသည်ကိုယေဘုယျအားဖြင့်လူအားဖြင့်ပြုလုပ်သည်၊ သူချစ်သောသူ၏ပါးစပ်ကိုလက်ချောင်းဖြင့်ခြေရာခံခြင်း၊ ဤသည်အတော်လေးတစ်ခုခေါ်ဆောင်သွားလုပ်ရပ်ကိုယ်စားပြု, နှင့်ကဲ့သို့စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်နိုင်ပါတယ် lip-to-lip အဆက်အသွယ်.
၎င်းသည်အနည်းငယ်ပိုမိုအားကောင်းသောထင်မြင်ယူဆချက်ဖြစ်သော်လည်းလက်ချောင်းအနမ်းနှင့်အနည်းငယ်ဆင်တူသည်။ လက်နှစ်ချောင်းအနမ်းမှာချစ်သူရဲ့လက်ကိုပိတ်ပြီးအနည်းငယ်စိုစွတ်စေပြီးချစ်သူရဲ့ပါးစပ်ကိုဖြည်းညှင်းစွာဖိနှိပ်ခြင်းပါ ၀ င်ပါတယ်။
ယင်း၏အမည်ကဖော်ပြသည့်အတိုင်း၎င်းသည်မသာအသုံးပြုသောအနမ်းအမျိုးအစားဖြစ်သည် ချစ်မြတ်နိုးတဲ့အတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုနိုးဒါပေမယ့်အထူးသဖြင့်အများပြည်သူအတွက်ချစ်ခင်၏ display ကိုသည်။ ဤသည်ကိုယေဘုယျအားဖြင့်၎င်း၊ ပွင့်လင်းသောနေရာများတွင်ပြုလုပ်သည်။
၎င်းသည် Kamasutra ၏အထူးခြားဆုံးအနမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ချစ်ခင်မှုပြသမှုအတွက်ကန့်သတ်ချက်မရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။
လွှဲပြောင်းထားသောအနမ်းကိုပရောပရည်ပြုလုပ်ခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ချစ်သူသည်ချစ်သူ၏မျက်မှောက်နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုအရသူမသည်ရင်ခွင်၌ထိုင်နေသောကလေးငယ်တစ် ဦး၊ ပုံတူတစ်ချောင်းသို့မဟုတ်သူမကြည့်နေသည့်အရာအားလုံးအားချစ်မြတ်နိုးသူ၏ရှေ့မှောက်တွင်အပြည့်အ ၀ အာရုံစိုက်စေသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ဤအနမ်းသည်သူမ၏အားအမှန်တကယ်အပ်နှံသည်ဟုဆိုလိုသည်။
သူတို့ကနို့သီးခေါင်းကိုတိုက်ရိုက်ပေးတဲ့သူတွေပေါ့။ ၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းမှာနှုတ်ခမ်းကိုနူးညံ့သိမ်မွေ့စွာလှုံ့ဆော်ရန်နှင့်တံတွေးအချို့ကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းမှနှုတ်ခမ်းလှုပ်ရှားမှု၏ရစ်သမ်နှင့်ဖိအားကိုပိုမိုပြင်းထန်စေနိုင်သည်။ ၎င်းအဖော်သည်ကြိုက်နှစ်သက်ပြီးဆန္ဒရှိပါကသူတို့၏ချစ်သူနို့သီးခေါင်းများကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်ဖိရန်သွားများကိုညင်ညင်သာသာသုံးနိုင်သည်။
၎င်းကိုဤအရာဟုခေါ်ဆိုနိုင်သည်မှာအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်စိတ်ကူးသည်အချိန်ကိုခြေရာခံ။ လှုံ့ဆော်ခြင်းကိုအာရုံစိုက်ရန်ဖြစ်သည်။ လက်ပတ်နာရီမပါသောအနမ်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောခံစားချက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက်ချစ်သူ၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏ထောင့်တစ်ထောင့်စီအားအနမ်းတစ်ချောင်းစီကိုရည်စူးထားခြင်းဖြစ်သည်။
ဒါကတစ်ခုဖြစ်တယ် အနမ်းအမျိုးအစားများ လိင်မှုကိစ္စကိုနိဒါန်းတွင်ပိုမိုအသုံးပြုပြီး၎င်းသည်သာယာသောနှိုးဆွမှုကိုအာမခံရန်အကောင်းဆုံးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Kamasutra သည်လိင်သင်ယူမှုအတွက်လမ်းညွှန်အဖြစ်အလွန်တန်ဖိုးထားခံရသောစာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပြီး၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများအရအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးနှစ် ဦး စလုံးသည်စွမ်းဆောင်ရည်အပြည့်အဝရှိပြီးစွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်သာမကဖော်ပြသည့်အနမ်းများသာမကဖော်ပြသည့်အနမ်းများလည်းပါ ၀ င်သည်။ ကတင်ပြခဲ့သည်။ သို့ရာတွင်၊ ဥပမာအဖြစ်အပျက်များကဲ့သို့သောအချို့သောတိကျသောအရာများရှိပါသည် ထိပ်အနမ်း, ထိုယောက်ျား၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏ပဏာမခြေလှမ်းလုပ်ငန်းစဉ်၏အောင်မြင်မှုကိုအာမခံဖို့အကြံပြုထားတဲ့အတွက်။ သို့သော်၎င်းသည်အရသာများနှင့်စုံတွဲစပ်ကြားရှိဆက်နွယ်မှုအမျိုးအစားအပေါ်တွင်များစွာမူတည်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့ရသည့်အတိုင်းနမ်းခြင်းနည်းလမ်းများသည်အမှန်တကယ်မတူပါ။ ဤစာအုပ်သည်ကိုက်ခြင်း၏အသုံးဝင်မှုကိုလည်းအလေးပေးဖော်ပြထားသည်မှာမှတ်သားရန်အရေးကြီးသည်။ သို့သော်တိကျသောနည်းဖြင့်နမ်းခြင်းကိုပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်ကြံဖန်ကွပ်ကဲခြင်းကချစ်မြတ်နိုးရသူများအတွက်ခံစားမှုများကိုပြသရန်နှင့်ခံစားချက်များကိုလှုံ့ဆော်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးသည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ သင့်မှတ်ချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့စောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » အတွေ့အကြုံများ » ၂၂ သင်ပေးနိုင်သောအမျိုးမျိုးသောအနမ်းများ